China FOTON BJ6103 / BJ6105 ifektri abakhiqizi | Izithombe
10M UCHUNGECHUNGE Umqeqeshi
Umqeqeshi wochungechunge lwe-Foton BJ6103 / BJ6105 ukhombisa ukusondela kwayo ekusebenzeni, ikhwalithi nokucwengwa. Ngenqubo yokukhiqiza evuthiwe nokuthengisa okungaguquguquki kwaminyaka yonke, kuzuze uthando olwengeziwe phakathi kwamakhasimende namakhasimende.
Ubukhulu Sekukonke 10490 * 2500 * 3380
UMax. Ukuqina ≥30%
Nciphisa Isisindo 10.35T
Ukuhlala Umthamo 54 + 1
Ukuhlanganiswa okumangalisayo kokusebenza kahle nokusimama komqeqeshi ochungechungeni lwe-10M kugcizelela nge-powertrain esebenza kahle kakhulu, ukusebenza kwenjini okufakiwe ngokusetshenziswa okuphansi, umzila wobuchwepheshe ovuthiwe osuka kokuhlangenwe nakho okuningana kokusebenza.
Igumbi le-Injini lifakwe i-alamu lokushisa lokuqapha ngesikhathi sangempela nedivayisi yokuzicisha ukufeza ukuqapha kwesikhathi sangempela; kusetshenziswa amapuleti ensimbi e-firewall ukuqinisekisa kangcono ukuphepha komshayeli nabagibeli; izinto ezingamelana namalangabi nezinto ezingamelana nelangabi ezinokusebenza okungcono kokuphepha zisetshenziswa ezungeze umthombo wakho wokushisa.
Imikhiqizo ye-Foton idlula ekuhlolweni okunzima kwezimoto nokuhlolwa kwe-rollover ngaphezu kwamakhilomitha ayizinkulungwane eziyi-100 esimweni sezinhlobo zemigwaqo ehlukahlukene nangaphansi kwezimo zezulu ezinzima kakhulu njengokushisa okuphezulu, izinga lokushisa eliphansi kanye nengcindezi ephansi.
I-Foton ifakwe amabhentshi wokuhlola ochwepheshe namathrekhi wokuhlola ahlukahlukene ukuqinisekisa ukuthembeka nokusebenza kahle kwemishini nezinhlelo lapho ibhasi le-Foton lifakwe khona. Njengoba inesakhiwo esiqinile futhi esiqinile, ibhasi le-Foton limelana nokushayisana nangaphezulu futhi livimbela ukuhlehliswa kwe-lateral. Ngaphambi kokungena enkonzweni, bavivinywa kanzima futhi baqinisekiswa.